Magaalada Xudur oo ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii Al-shabaab u geysteen” Sawiro” – Radio Muqdisho
Magaalada Xudur oo ka soo kabanaysa dhibaatooyinkii Al-shabaab u geysteen” Sawiro”
Magaalada Xudur ee xarunta gobollka Bakool ayaa dowladda Soomaaliya waxaa ay kooxda Al-shabaab ka saartay 7 bishii Maarso ee sanadkii tagay ee 2014ka, maleeshiyaadka Al-shabaab ayaa wixii markaas ka dambeeyay waxaa ay Al-shabaab isu dayeen in ay magaalada Xudur ay go’doomiyaan oo ay u diidaan gawaaridda soo galaysa magaaladaasi.
Magaalada ayaa hadda si tartiib tartiib ah ugu soo kabanaysa dhibaatooyinkii Al-shabaab ay u geysteen xilligii ay gacanta ku hayeen,guddoomiyaha gobolka Bakool Mudane Maxamed Cabdi Tall ayaa warbaahinta Qaranbka u sheegay in magaalada ay soo galaan gawaarida raashiinka sida inkastoo wadooyinka qaar ay wali Al-shabaab u xiran yihiin dhowaana la furi doono dhammaan wadooyinka soo gala magaalada Xudur.
Guddoomiye Tall ayaa intaa ku daray in magaalada Xudur ay hadda tahay mid amaankeeda la isku haleyn karo isla markaan si wadajir ah amaankeeda ugu shaqeeyaan Ciidanka Boliiska, Militirga iyo Nabad sugidda oo kaashanaya shacabka magaalada Xudur.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa sidoo kale saldhig weyn ku leh ciidamada Midowga Africa ee AMISOM gaar ahaan kuwa ka socoda wadanka Ethiopia kuwaas oo ka howlgala guud ahaan degooyinka shanta ah ee uu gobolka ka kooban yahay.
Taliyaha Guutada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Bakool Gaashaanle Dhexe C/raxmaan Maxamed Cismaan (Timada Cadde) ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in ciidamada xoogga dalka ee halkan ku sugan ay ka adkaadeen maleeshiyaadka Al-shabaab.
Gaashaanle Dhexe Timada Cadde ayaa sidoo kale sheegay in dhowaan howlgalo ay u qaadeen goobo ay ku dhuumaaleysanayaan kooxda Al-shabaab ay ku dileen tiro aad u badan oo ay kamid yihiin horjoogiyaal sar sare oo kooxda ka tirsan.
Dhanka kale magaalada Xudur waxaa ka furan dhowr Iskuul oo isugu jira Dugsi Hoose , Dhexe iyo sare waxaana wax ka barta boqolaal carruurta ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee Koonfur galbeed Soomaaliya.
Caafimaadka ma jiro Isbitaal loogu adeega dadka ku nool gobolka Bakool dhammaan xarumihii caafimaad ee ka jiray Xudur waxaa baabi’iyay kooxda Al-shabaab,hadda waxaa jira xarun lagu daryeelo Hooyada iyo Dhallaanka oo inta ay u adeegi karo ay aad u yar tahay maadaama uu yar tahay qalabka yaala xarunta isla markaana aysan jirin Dhakhtar xirfadle ah oo ka howlgala xaruntaasi.
MUUQAAL-Ra’iisul Wasaare Cumar oo shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee golaha Wasiirada Cusub.SAWIRRO
MUUQAAL-Ra'iisul Wasaare Cumar oo shir guddoomiyay kulankii ugu horeeyey ee golaha Wasiirada Cusub.SAWIRRO